पान्डोरा पेपर्स के हो ? यस्तो छ बच्चाले समेत बुझ्‍ने व्याख्या – MySansar
अहिले विश्वभर हङ्गामा भइरहेको ‘पान्डोरा पेपर्स’ लिक के हो? रेड्डिटका एक प्रयोगकर्ता DanGliesack ले यसअघि पानामा पेपर्स सार्वजनिक हुँदा पाँच वर्षको बच्चाले पनि बुझ्ने गरी यो जटिल विषयको एउटा व्याख्या गरेका थिए, जसलाई मूलधारे मिडियाले समेत साभार गरे। उनकै व्याख्यालाई नेपाली परिवेशमा ढालेर भावानुवाद गरेको छु, शायद् यसले सजिलोसँग बुझाउन मद्दत गर्छ कि-
श्यामबहादुरकी आमा निकै व्यस्त हुन्छिन्। त्यसैले उनले रामबहादुरकी आमाले झैँ खुत्रुक्के जाँच्ने फूर्सद पाउँदिनन्। त्यसैले रामबहादुरले आफ्नो खुत्रुक्के त्यहाँ राखेको कुरा गोप्य नै बनाउन सक्छ।
अब टोलका सबै बच्चाहरुले यो त राम्रो उपाय हो भन्ने सोच्‍न पुग्छन्। अनि सबै जना खुत्रुके लिएर श्यामबहादुरको घरमा जान्छन्। अब श्यामबहादुरको खाटमुनि सबै छिमेकीहरुको खुत्रुकेहरुले भरिन्छ।
सबै बच्चाले नराम्रो कारणले त्यहाँ खुत्रुक्के जम्मा गरेका भने हुँदैनन्। उदाहरणका लागि-
रामबहादुर आफ्नो गोपनीयता चाहन्थ्यो।
हरिका दाजुले चोरी गरेको रकम राम्रो ठाउँमा लुकाउन त्यसो गरेको रहेछ।
कृष्ण आफ्नी आमालाई थाहा नदिई जन्मदिनको उपहार किन्न पैसा जम्मा गर्न चाहन्थ्यो।
रविन्द्र अर्काको पर्सबाट रकम खुसुक्क चोर्थ्यो र बाबुआमाले थाहा नपाओस् भन्ने चाहन्थ्यो।
भोजबहादुरले आफ्नै आमाको ब्यागबाट रकम चोर्थ्यो।
मोटे मनोजलाई उसका आमाबुबाले जङ्कफूड र चकलेट किनेर नखाओस् भन्ने लाग्थ्यो। मनोज भने आमाबुबालाई थाहै नदिई आफूलाई मन परेको कुरा किन्न चाहन्थ्यो।
अब पान्डोरा पेपर्सबारे केही बुझौँ।
पान्डोरा पेपर्स भनेको एक करोड १९ लाख गोप्य इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट हो जुन अफशोर लगानीसित सम्बन्धित छ। १४ विभिन्न अफशोर सेवा दिने कम्पनीबाट प्राप्त कागजातलाई आइसिआइजेको सहकार्यमा विश्वका विभिन्न मिडिया लागेर हिजो यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपालका तर्फबाट खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले यसमा सहकार्य गरेका हुन्। यसको रिपोर्ट विभिन्न नेपाली मिडियामा प्रकाशित भएका छन्।